SAWIRRO:-Dowladda oo soo Bandhigtay Meydadka Al-shabaab la laayay * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By Ardaan Yare	 On Apr 4, 2021
Saraakiisha Ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanka Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa soo bandhigay Meydadka 75 kamid ah Al-Shabaab kuwaas oo loogu dilay weerar ay isku dayeen inay shalay ku qaadaan Ciidamada.
Saraakiil ka tirsan Ciidanka Xoogga dalka ayaa sheegay in la laayay dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab oo isku dayay inay weerar ku qaadan Saldhiga Ciidamada ay ku leeyihiin Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose.
“Tiro kale oo badan ayaa dhanka kale looga dilay deegaanka Bariire, kuwaas oo la rajaynayo in saacadaha soo socda la soo Bandhigo” ayaa lag yiri Qoraal lagu daabacay Wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee SONNA.
Al-shabaab warar ay ku qoreen barahooda qadka ayaa waxaa ay ku sheegeen in weerarkii shalay ay ku qaadeen Saldhigyada Ciidamada dowladda Federaalka ee Awdhiigle iyo Bariire ay ku dileen in ka badan 57 Askari oo ka tirsan Dowladda.